Punching Na | Martech Zone
Satọde, Satọdee 29, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Na Fraịde, anyị na ndị otu anyị nwere ọmarịcha oge,Mpempe akwụkwọ , na-ekwu banyere ngwanrọ azụmaahịa obere azụmaahịa na uto ha na ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ. Otu mkparịta ụka kpara m aka na nke ahụ na-ekwuMpempe akwụkwọ 's rebranding.
Iji nye ụfọdụ ndabere,Mpempe akwụkwọ izizi malitere dika Formspring. Mgbe ndị otu ahụ hụrụ etu ngwa ọrụ ha si wee bụrụ nke ama ama n’ịjụ ajụjụ, ha wepụta ngwa ọrụ maka nke ahụ ma kpọọ ya Na-ama, wee degharịa ha ngwa ọrụ mbụ ha Mpempe akwụkwọ. Formspring bugara isi ụlọ ọrụ ha na Silicon Valley naMpempe akwụkwọ nọgidere na Indianapolis.
Dịka enyi Ade na ụlọ ọrụ ya, ekwenyere m na m kwupụtara nchegbu m banyere mgbanwe na otu ọ nwere ike isi metụta ọchụchọ. Mana mgbanwe ahụ ka emere,Mpempe akwụkwọ nwere a siri ike mbọn ekele otu na KA + A, na nnukwu olu nke ndị ọrụ Formspring nwere obi ụtọ… dị ka Formspring bụ onye jikọtara ya na ndị isi ngwa mmekọrịta mmekọrịta na Silicon Valley. Nke bụ eziokwu bụ, ọ bụ ezie na ọ na-egbu mgbu, ihe kachasị mma bụMpempe akwụkwọ mere bụ naanị ịkụ ọkpọ, nkatọ ma nọgide na-ejere ndị ahịa ha ozi.
Mee elu mee ala, ọ rụrụ ọrụ dị mma… ma ọ bụrụ na ọ bụghị zuru okè.Mpempe akwụkwọ na-aga n'ihu na-eto ma na-aga n'ihu na-aga n'ihu ma na-agbanwe agbanwe - launching a Dropbox mwekota na ụbọchị ole na ole sochirinụ nke ga-ewepụ uto ha!
Amaghị m mkparịta ụka dị n'ime ahụMpempe akwụkwọ n'oge ahụ, mana ejiri m n'aka na enwere nsogbu… yana ọnwụnwa ịlaghachi azụ na mkpebi ahụ. Ka m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ, agbanyeghị, achọpụtara m otu njirimara dị na ụlọ ọrụ na-aga nke ọma. Ha ọkpọ site na.
Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị emezi. Ọtụtụ oge, ndị nkatọ na-ezighi ezi. Ndị na-ede blọgụ, ndị odeakụkọ na ndị nkatọ ndị ọzọ bụ ndị edemede ma anaghị enwekwa ọganihu azụmaahịa nke aka ha iji tozuo ha maka ịtụ aro maka otu ụlọ ọrụ kwesịrị isi rụọ ọrụ. Mgbe m malitere DK New Media, Elere m ma na-ege onye ọ bụla ntị na azụmahịa m fọrọ nke nta ka ọ kwụsị ozugbo ọ malitere.
Ọ bụ mgbe m bidoro ịgwa ndị nwere ihe ndekọ egwu maka azụmaahịa na-aga nke ọma na-amalite ịchụso anya m nke azụmahịa m kwesịrị ịbụ na azụmaahịa m gara nke ọma. Nzukọ na Chris Baggott, Kristian Andersen, Matt Nettleton, Harry Howe, David Castor, Todd Boyman, Adam Small, Doug Theis na Michael Cloran nyere m mmụọ nsọ m gafere. M gbanwere azụmahịa m nke ukwuu, tụfuru ezi enyi m, ma gee ntamu na mpaghara ahụ na-ebu amụma ọnwụ m.
Ma m ọkpọ ọkpọ.
DK New Media dị ka azụmahịa nkịtị karịrị nnọọ afọ 2 ma anyị nwere ndị ọrụ oge niile 6 na ọnụ ọgụgụ ndị ahịa. Anyị ka bịanyere aka na Roche na mba ụwa, mechaa nke mbụ nke ọtụtụ ọrụ maka VMware, ma nwee ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe dịka Angie's List, Zmags, Mindjet, TinderBox, Delivra, Right On Interactive na ndị ọzọ. Anyị nwere ndị ahịa ndị ọzọ laghachitere mgbe emezigharị nke ọma… dịka ChaCha, Webtrends, na VA Loan Captain.
Anyị pịa ọkpọ.
Ndị otu anyị pere mpe ma dịgasị iche iche, mana anyị na-eme ngwa ngwa ma anyị niile na-eme ihe ike na nsonaazụ. Jenn bụ ihe dị mkpa nke otu anyị na - eme ka ihe niile na - agagharị, Stivin na - ewepụ ihe niile na - arụ ọrụ ebube, Marty bụ ọfụma nchọpụta na ihe ịma aka nye ndị ahịa anyị, Nikhil nwere nlebara anya zuru oke, na Nathan bụ onye na-emepụta okwute nke ga - bụrụ aha na ụlọ ọrụ ụfọdụ ụbọchị. Ndị otu anyị niile nwere otu ihe - anyị na-agbagha ya. Anyị anaghị ege ndị na-anụ anyị ntị, anyị na-akpa nkata ụzọ nke anyị. Agencylọ ọrụ anyị dị ka ndị ọzọ ọ bụla na ọbụna na-agbagha ụfọdụ ndị ahịa anyị ebe ọ bụ na ha arụbeghị ọrụ na ụlọ ọrụ dịka nke anyị.
Kwụsị ige igwe mmadụ ntị ma kpaa nkata ụzọ nke gị. Ndị mmadụ ga-agwa gị na ị nweghị ike ime ihe ị nwere ike. Nzaghachi ndị ahịa na ngwaahịa na ọrụ na-enyere onye ahịa aka… mana ọ nwere ike ọ gaghị abụ maka ọdịmma kasịnụ nke ụlọ ọrụ gị. Fọdụ ndị ahịa ga-emerụ ụlọ ọrụ gị ahụ ma ọ dị mkpa ka ị mụta otu esi tufuo ha. Otutu mmadu choro maka uzo di nchebe, obughi uzo di egwu.
elekọta mmadụ media nwere ike ịbụ ihe kachasị njọ na ụlọ ọrụ ọ bụla… igwe mmadụ ahụ enweghị ọgụgụ isi n'ozuzu ya, groupthink bụ nkezi - ọ bụghị otu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga nke ọma, ị ga-akwụsị ịgbaso na ị ga-amalite iburu ụzọ.
Punch site na.
Tags: azụmahịampempe akwụkwọmpempe akwụkwọọhụrụLeadership
Sep 29, 2012 na 4:34 PM
Daalụ maka ịkekọrịta Doug a. Ọ na-atọ m ezigbo ụtọ ma ọ bụ nnukwu ihe mmụta n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ị na-arụ. Ekele maka ncheta afọ abụọ a!
Sep 29, 2012 na 4:40 PM
Daalụ @jaschakaykaswolff: disqus! O doro anya na ị ga - agbanwe: azụmaahịa na azụmaahịa ugbu a nke Mindjet na - agabiga - enwere m obi abụọ ọ bụla na gị na okpu ị ga - afụcha ma anyị ga - aga n'ihu nrụgide na - adịghị akwụsị akwụsị iji nyere gị aka ịme ya. Ọzọkwa, daalụ maka ịbụ onye mmụọ nsọ na onye otu na-akwụwa aka ọtọ. I nyeere aka ịkwanye anyị n'akụkụ anyị chọrọ ịga ma bụrụ nnukwu ihe na mbido na ọganiihu anyị.
Sep 30, 2012 na 12:12 PM
Doug, daalụ maka ịnwe anyị na ekele maka ntinye akwụkwọ. Enwere m ike ijide gị na enwere “nsogbu” n'oge ahụ. Ọ bụ ihe ịtụnanya etu ịnwe ngwa siri ike, ndị ahịa dị egwu, na nnukwu ndu, nwere ike inyere gị aka ịchọta ike ị gafere. Ọ masịrị m ikiri ka ị na-eto DK New Media ma enwebeghị obi abụọ gbasara ihe ị ga-emeli. Are bụ otu nwoke na-emebi ndị ọrụ aka gị, ma ugbu a ị nwere otu, anaghị m atụ anya ihe ọ bụla mana ọ kacha mma maka ụmụ okorobịa. Ekele dịrị gị na ịkwalite azụmahịa gị.